Ngwa Pịa: The Mobile App Designer for Designers | Martech Zone
Ngwa Pịa mepụtara iji dozie oghere ihe ọmụma dị n'etiti ndị na-ese ihe nkiri na ndị mmepe. Dịka onye mmebe, onye guzobere Grant Glas chọrọ iwu koodu ngwa n'efu. Dịka onye nrụpụta, Kevin Smith dere azịza ya. Ha mepụtara ngwa 32 na-eji ụdị ngwa mbụ nke App Press yana kemgbe ịmalite, ndị ọrụ 3,000+ kere ngwa na ikpo okwu ha.
Emepụtara App Press ka ọ dị ka Photoshop ma rụọ ọrụ dịka Isi Okwu. Nke a na-eme ka onye ọ bụla na-ese ihe nwee ike ima elu ma malite iwu ozugbo. Ọ dịghị ngwa ngwa okike ndị ọzọ na-ele anya na ọrụ dịka App Press.
Atụmatụ Pịa Pịa
Editọ Ọba - Bido mepụta ngwa gị n'ime nkeji were ndị ndezi nhazi. App Press na-ebido dị ka akwa ọcha na-enye ohere ka onye mmebe mepụta ibe iji echiche oyi akwa. Bulite akwa na peeji nke ahụ wee nyefee arụmọrụ enyere aka. Jikọọ na ibe ndị ọzọ na ngwa gị ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ site na ọkwa nke hotspot; mepụta linar ma ọ bụ na-abụghị linear. App Press sitere na ntanetị ma ọ chọghị ntinye ngwanrọ. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ịnọ na Mac ma ọ bụ PC, n’ụlọ ma ọ bụ n’ebe ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịnweta atụmatụ gị n’ebe ọ bụla, n’oge ọ bụla.
Akụ Akụ - Bulite ngwa ngwa gị niile na ọba akwụkwọ gị. Maka usoro dị mfe ma dịkwa mfe, jikọọ akaụntụ Dropbox gị ma kpochapụ usoro nbudata kpamkpam. Ndị otu anyị nke ndị na-emepụta wekọtakwara ọtụtụ ihe efu. Akụ ndị a gụnyere bọtịnụ, ndabere, nkụnye eji isi mee na ụkwụ nke onye ọ bụla nwere ike iji na ngwa ha. The Basic App Press na akaụntụ na-amalite site na 100 MB nke ohere maka ọbá akwụkwọ gị na akaụntụ Pro nwere 500 MB.
Malite Nhazi Ugbu a - Usoro ihe eji eke akwa maara onye ọ bụla na-ese ihe. Kemgbe e webatara Photoshop 3.0 na 1994, nhazi abụrụla ụzọ a tụkwasịrị obi maka onye ọ bụla na-ese ihe. Imejuputa atumatu a na App Press na-enye ohere obara onye mmebe aka imepụta ngwa ngwa nke oma. Họrọ otu akwụkwọ si na Ọbá akwụkwọ Asset gị ma debe ya na kwaaji nke Editọ Layout. Usoro nhazi dị mfe, dị mfe ma dịkwa ọcha.
Mepụta ngalaba na ibe - Ngwa etinyere na App Press na-egosipụta mmetụ na ọdịdị nke mpempe akwụkwọ mgbe ejiri echiche igodo nke weebụsaịtị webata ya. Wụpụta ngalaba iji mepụta igodo na-enweghị njikọ jikọtara ọnụ site na ebe ndị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ wuo usoro igodo na-asọ dị ka magazin. Mepụta ihe omuma di ka ndi ozo site na iji App Press.
Mfe Hotspots - Tinye ngwa ngwa mmetụ na arụmọrụ na ngwa gị site na ọkụ. E nwere ụdị hotspot atọ dị iche iche na App Press nke na-enye gị ohere ijikọ ibe gị ọnụ, wepụta ọdịnaya weebụ ma ọ bụ tinye otu mgbata Twitter na Facebook nkekọrịta.
App Press emepewokwa nke ha Nyocha ihe ngwa. The ngwa-enye gị ohere ka ịhụchalụ gị ngwa na ngwaọrụ ọ bụla. Ngwa a na - akwụghị ụgwọ dị na Applọ Ahịa App, Google Play na ngwa weebụ. Wụnye ya na iPhone, iPad, iPod Touch, gam akporo kwadoro ekwentị na / ma ọ bụ mbadamba iji hụchalụ mgbanwe ọ bụla ị mere.
Nwere ike ịlele ụfọdụ nke ngwa ndị e mepụtara na App Press na saịtị ha.
Tags: ngwa igwengwa pịantinyeipad ngwangwa iphonemobile ngwaimewe ngwa ngwa ngwambadamba ngwa
Feb 2, 2013 n’elekere 11:28 nke abali
Mma. App Press bụ ezigbo ikpo okwu maka ndị nrụpụta na ndị mmepe. Ọ na-edozi ọdịiche ahụ nso.